Umlinganiswa oSebenza kwi-Intanethi-Bala abalinganiswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ikhawuntari yaBalinganiswa be-Intanethi-Bala abalinganiswa
Ngokuqinisekileyo amaxesha amaninzi ubudinga Bala inani labalinganiswa kwisicatshulwa esithile. Ngoku konke oku kulula kakhulu ngenxa yale nto ikhawuntari yomlinganiswa online, kwaye oko kuyakuvumela ukuba ubale inani labalinganiswa nakwesiphi na isicatshulwa ngokukhawuleza nangokulula.
Bhala isicatshulwa kule bhokisi ilandelayo, cofa kwiqhosha "Bala abalinganiswa" yiyo lonto. Lula, ayinakwenzeka.
Ukongeza, sinefayile ye- ikhawuntara yamagama kwi-intanethi iya kuba luncedo kakhulu kuwe.
1 Isebenza njani ikhawuntara yomlinganiswa okwi-Intanethi?
2 Yimalini ikhawuntara yomlinganiswa?
Isebenza njani ikhawuntara yomlinganiswa okwi-Intanethi?
Ukuba sisixhobo esikwi-Intanethi, wethu ikhawuntari yomlinganiswa Ayifuni ukufakwa kwangaphambili kwikhompyuter yakho okanye kwiselfowuni, ukuze uyisebenzise kwangoko xa ungena kweli phepha.
ukuba Yazi inani labalinganiswa bakho okubhaliweyoKufuneka ufake lo mxholo kwibhokisi engentla, kwaye ekugqibeleni ucofe kwiqhosha elingezantsi ukubonisa umyalezo kunye nabalinganiswa ababaliweyo.
Kwimizuzwana nje embalwa, uya kuba nesiphumo ngqo saba bantu. Kubalulekile ukuba uyazi loo nto izithuba nazo zibaliwe, kodwa ukuba ufuna ukuba siqalise ukusebenza okungathatheli ngqalelo, siya kuvuya ukuba ungasinxibelelana nathi ukuze sikwazi ukwenza le ndlela intsha kwisixhobo.
Yimalini ikhawuntara yomlinganiswa?
Kweminye imisebenzi ifuna ubuncinci beempawu ukubanakho ukuvavanya umsebenzi, kuyacetyiswa ukuba nesixhobo ukuze ukwazi ukwenza le nkqubo ngokuzenzekelayo nangokulula.
Ndiyabulela ikhawuntari yomlinganiswa Ukusuka kwi-Creativos ekwi-Intanethi, uya kuba nakho ukufumana la manani ngendlela emnandi kakhulu, kuba ngokufaka isicatshulwa, uya kuba nakho ukwazi abalinganiswa bebonke kwisicatshulwa sakho.
Kodwa kuthekani ukuba isixhobo asisebenzi? Nangona kufanele ukuba ihambe ngokugqibeleleyo, ungasebenzisa izixhobo ezinje ngeLizwi ukwenza ukubala komlinganiswa: ukuya bala abalinganiswa kwiLizwi, Kuya kufuneka ukhethe icandelo lesicatshulwa ofuna ukusibala, kwaye ucofe ku Ukuphonononga> Ukubalwa kwamagama> Abalinganiswa.
Njengoko ubona, yinkqubo enzima ngakumbi njengoko kufuneka ucofe iqela, ngenxa yoko sicebisa ukuba uhlale usiza kule ndawo, kuba ngonqakrazo olulula uya kuba nayo le nto uyifunayo.
Siyathemba ukuba esi sixhobo sokubala se-intanethi siluncedo kuwe.